Ungayibeka kanjani futhi uyihlaziye imakethe yokwakhiwa kwe-aluminium
I-Aluminium UKWAKHA isetshenziswe kabanzi empilweni yansuku zonke, kepha hhayi inani lamabhizinisi azimele wodwa embonini ye-aluminium alkginging eye yanda, okusho ukuthi, amabhizinisi amaningi azimele anezimo zomuntu ozimele ngokomthetho ayazenzela imali futhi ayazixhasa ngezimali. ngapha ...
I-Aluminium extrusion ngumshini ocibilikisa i-aluminium ezingeni lokushisa eliphezulu bese uwukhipha ube sesimweni esithile. Ukukhiqizwa kwe-aluminium extrusion kuyadingeka ukuthi kuphakame futhi isivinini se-extrusion sizinzile. Ekuguqulweni kokonga amandla kagesi wokubacindezela, i-aluminium extrusion nayo iyimodeli ene-h ...
Ukusetshenziswa kwe-aluminium ezimotweni kukhombisa ukukhula okwandayo unyaka nonyaka. Kunamamodeli amaningi asebenzisa i-aluminium ngengxenye noma ephelele. Uhlelo lokudlulisa imoto LUSEBENZISA izingxenye ze-aluminium, ezinamandla kuphela nobulukhuni obanele, kepha futhi zinokuqhuba okuhle kokushisa. Amaqiniso h ...
Uyini umgomo we-aluminium UKWAKHA
Kulezi zinsuku, ubuchwepheshe bokufaka ubuchwepheshe be-aluminium alloy buya buvuthwa ngokwengeziwe, ikakhulukazi kufaka phakathi ubuchwepheshe bokwakha mahhala be-aluminium alloy, i-aluminium alloy ekwakheni, ukwelashwa kokushisa kwe-aluminium alloy ekwakheni, imishini ejwayelekile yokwakha i-aluminium alloy, ubuchwepheshe obusha bokwakha i-alumi .. .
Ngabe kukhona izindaba ezidinga ukubhekelwa esicelweni a
Imoto yakhiwa izingxenye eziningi, ezinye zazo okuyizingxenye ze-aluminium alloy, ezaziwa nangokuthi izingxenye ze-aluminium alloy. Namuhla sizokwethulela ukukhiqizwa kwezingxenye ze-aluminium alloy auto lapho okubalulekile ukuphawula, i-aluminium alloy emotweni lapho isicelo sisebenza khona. Ukusetshenziswa kwe-aluminium ...
Iyiphi inzuzo okudingeka ishintshe ingalo ye-aluminium alloy
Kukhona amacala athile akhethekile, njengokuguqulwa kwengalo yokujikisa noma ukuqhekeka kwengalo yokujikisa ebangelwe ngumthelela. Uma kukhona ukujikijela ohlangothini ngesikhathi sokushayela, isisindo sihlukile kwesobunxele kuya kwesokudla, isiqondisi sokwenza amabhuleki asikho kuthrekhi, futhi ingalo yejingi inokunyakaza okukhulu noma i-abnorma ...
Aluminium extrusion die life
I-die iyisixhumanisi esibaluleke kakhulu ekukhiqizeni i-aluminium extrusion yezimboni. Ikhwalithi yokufa ithinta ngqo ikhwalithi yephrofayili ye-aluminium ekhishiwe. Silinganisela ukuthi impilo yesikhunta nayo iyingxenye yokubalwa kwezindleko. Ngakho-ke impilo yesikhunta ihlobene nani? Aluminium extrusion Okokuqala, t ...
Ukuhlaziywa kunzuzo nethemba le-aluminium alloy in
Insimbi ekhethwayo njengenye indlela yensimbi nensimbi i-aluminium, okuyingxenye yesithathu kuphela eminyene njengensimbi noma insimbi, inciphisa ubukhulu besakhiwo esifanayo sensimbi phakathi lapho isetshenziswa ezimotweni, futhi ayiphangisi. Uyazi ukuthi kungani i-aluminium alloy ilungele izimoto? Yini intuthuko yesikhathi esizayo ...
Kungani ungasebenzisi i-aluminium alloy kumaqoqo?
Ukwehla kwesisindo mhlawumbe kungumsebenzi omkhulu kunayo yonke onikezwe ngayo yonke impahla entsha yezimoto. Noma ngabe i-aluminium ingena esikhundleni sensimbi ejwayelekile noma ipulasitiki ingena esikhundleni sensimbi, umphumela omkhulu kakhulu noma oyisisekelo kakhulu ukwehla kwesisindo, ngoba ukulahleka kwesisindo kuyindlela eqonde kakhulu, elula futhi ephumelela kunazo zonke yokwenza ngcono imoto fue ...
Inqubo yokwakha i-Aluminium Ukushisa kokushisa ngesikhathi sokufaka
UKWENZA ukukhiqizwa kungenye yezindlela eziyinhloko zokunikezela ngokungenalutho kwezingxenye zemishini ezimbonini ezahlukahlukene. I-Aluminium alloy ingenye yezinsimbi ezingasetshenziswa kakhulu ezisetshenziswa kakhulu, futhi umphumela wayo ungowesibili kuphela kunensimbi. Uyayazi inqubo yezobuchwepheshe yokwakha i-aluminium? Ingabe kukhona ukushisa ...
I-Car aluminium alloy nensimbi yikuphi okuhle?
Isondo lemoto liyingxenye ebaluleke kakhulu yezimoto, manje iningi lezimoto zisebenzisa ihabhu lesondo le-aluminium alloy, kodwa futhi kunezimbalwa kakhulu izimoto ezihambisanayo noma izimoto ezingaphansi kwezingu-100,000 ezinehabhu lesondo lensimbi. Kungabonakala ukuthi ihabhu lesondo le-aluminium lingcono kunehabhu lesondo lensimbi. Izinzuzo zestee ...
Umehluko phakathi kwezakhiwo ze-aluminium alloy i-forg
UKWAKHA inqubo yenqubo ye-aluminium alloy - umsebenzi, ukuqina, ukuqina kwegesi, ukuncela, ukuqhekeka okushisayo. Zimelelani lezi zici? Uyini umehluko phakathi kokulingisa kwe-die ne-aluminium casting? UKWAKHA izici ze-aluminium alloy Mobility: ikhono le-alloy ...